Google Stadia: dhata nyowani pane yevhidhiyo mutambo webasa | Linux Vakapindwa muropa
Google Stadia: dhata nyowani nezve vhidhiyo mutambo webasa
Takatotaura nezvazvo kuti chii Google Stadia muLxA, asi ikozvino tinoziva mamwe data nekuda kwemibvunzo nemhinduro zvakaunganidzwa nezve kuti sevhisi inozovei. Tinoziva kuti Google inomhanyisa vhidhiyo yemitambo chikuva ichatanga munaNovember wegore rino Asi kuchine zvidimbu zvakawanda zvechirahwe izvo zvisingazivikanwe. Uye izvo ndizvo zvidimbu zvatinokuunzira nhasi kuti iwe ugone kuwana imwe pfungwa yekufungidzira yezvaunogona kana zvausingatarisiri ...
Ivo vachangobva kugadzira AM (Ndibvunze Chero Chinhu) ivo vakaita pane iyo Reddit portal. Ikoko, vashandisi vakatanga kubvunza uye mimwe mibvunzo inonakidza yakapindurwa iyo inopa zvakawanda zvinongedzo nezveGoogle Stadia. Kupfupisa vese uye nekukupa zano rakajeka, ini ndinongosiya zvimwe zvezvakanyorwa izvo zvinojekesa zvinhu zvakawanda nezve ino nyowani "Netflix yemitambo yemavhidhiyo":
Pane mhando mbiri dzekunyorera, imwe Base uye imwe Pro. Iyo Pro yakafanana neXbox Live Goridhe kana PlayStation Plus. Base ichave yakachipa, asi ichave isina mamwe maropafadzo. Mune zvese unogona kutenga mitambo yemavhidhiyo kubva pane iyo runyorwa kuti utambe nekukasira.
Pro ichave nemahara emavhidhiyo mitambo izvo zvicha kupihwa kwauri. Ukabvisa Pro kuti uende kunheyo, unozotadza kuwana mitambo iyo yawakapihwa mahara, kunyange uchizochengeta mimwe yacho.
Ukadzokera ku simudzira yako Akaundi account kuPro, iwe unozokwanisa kudzoreredza ese emahara emavhidhiyo emitambo awakarasa pawakaenda kuBase, asi hauchakwanise kuwana emahara emavhidhiyo emitambo akaendeswa mukati menguva iyo iwe yaunyoresa.
La Google Stadia mushandisi interface ichaunzwa pamberi peNovember kuburitswa. Izvo zvichave zvakapusa uye zvinokutendera iwe kutamba pane chero skrini pasina kumirira kurodha pasi, zvigamba, nezvimwe.
Iwe unogona maneja zvaunotenga uye zvinyorwa zveshamwari, masocial network, nezvimwe. Mhedzisiro haizogoneswe pakuvhurwa, asi ichauya zvishoma gare gare.
Google Stadia inotsigira akajairwa HID mapikicha zvemarudzi ese, saka mamwe maratidziro anoshandawo seXbox Controller, Steam Controller, Google pachayo, nezvimwe. Izvi zvinodaro nekuti vanoshandisa SDL sehwaro.
Asi kana iwe uchida kutamba paTV ipapo iwe unenge uchida Stadia Mutongi uye Chromecast Ultra.
Kana Google Stadia ikavhara nekuti haina kubudirira, semuenzaniso, kumwe kunetsekana ndekwekuti vashandisi vanochengeta zvidzitiro zvakachengetedzwa, nezvimwe. Zvakanaka Ivo vanozotsigira Takeout kuti ugone kurodha yako vhidhiyo mutambo metadata kana iwe uchida uye nekudaro haungarasikirwe nechinhu. Izvo zvavasina kutaura ndezvekuti iwe ungachengeta iyo yakatengwa vhidhiyo mutambo ...
Google Stadia, zvinosuwisa, haitsigire maMOD. Asi zvinoita sekunge vangangoda kuzviisa mune ramangwana uye vagadziri vari kuyedza kutsvaga nzira yakanakisa yekuzvisanganisira mune ramangwana Izvo zvingave zvakanaka kumhanyisa simulation mitambo inotsigira maMODs kana Yekurima Simulator, nezvimwe.
Ivo vanoshandawo for tsigira mutambo wepuratifomu, uye ndicho chinhu chakakosha kune yavo yakawanda nzira.
El Google Stadia tsigiro ichave yakazara pane chero chishandiso kana inoshanda sisitimu inotsigira izere Google Chrome browser. Sarudzo yakanaka yemitambo yemavhidhiyo isingashande online, isingashande parizvino paStam Play (Proton) uye kuti vagadziri vavo havadi kuendesa kuLinux, nekuti neStadia unogona kuitamba kubva ku distro yako pasina dambudziko.
Ubisoft ichabatanawo uye inotora yayo Uplay + chikuvaNaizvozvo, izvo zvinowedzera vhidhiyo yemitambo raibhurari yekambani iyi kune iyo yeGoogle Stadia.
Kana zvakadaro iyo yemavhidhiyo mitambo iyo yauchazopaZvakanaka, ndinofunga rondedzero ichakura kusvika paine zviuru nezviuru zvavo. Asi panguva ino gumi nemaviri akasimbiswa, vanomira pachena:
Gedhi reBaldur III
Kana iwe ukawedzera izvo zve Uplay + rondedzero yacho inokura zvishoma kuwedzera ichiwedzera:
Anno 1800 Deluxe Shanduro
Anno 2205 Yekupedzisira Shanduro
Assassin's Creed Director's Dura
Assassin's Creed Hukama hweDeluxe Edition
Assassin's Creed Makoronike China
Assassin's Creed Makore India
Assassin's Creed Makore Russia
Assassin's Chitendero Rusununguko Chema Yakamira Yakadhindwa Edition
Assassin's Creed II Dhizaux Edition
Assassin's Creed III Kusunungurwa Kwakadzoserwa
Assassin's Creed IV Nhema Mureza Goridhe Edition
Assassin's Creed Odyssey Yekupedzisira Edition
Assassin's Chitendero Chinotangira Goridhe Edition
Assassin's Creed Origins Discovery Kuratidzwa
Assassin's Creed Revelations Yakajairwa Edition
Assassin's Creed Syndicate Goridhe Edition
Assassin's Creed Kubatana Standard Edition
Beyond Zvakanaka uye Zvakaipa
Hama mune zvombo: Kuwana Ropa
Hama mune zvombo: Hells Highway
Hama muArms: Mugwagwa weGomo 30
Far Cry 2 YeHomeune Edition
Kure Kuchema 3 Ropa Dhiragoni (Yakamira)
Far Kuchema 3 Deluxe Edition
Far Kuchema 4 Goridhe Edition
Far Kuchema 5 Goridhe Edition
Far Cry Nyowani Dawn Deluxe Edition
Far Cry Primal Dhijitari Apex Chinyorwa
YeRukudzo Kuchengeta Moto Moto
Gods & Monsters (kuuya munguva pfupi)
Simba uye Mashiripiti IX
Simba uye Mashiripiti VII Yeropa Uye Rukudzo
Simba uye Mashiripiti VIII -Zuva reMuparadzi
Simba uye Mashiripiti X Nhaka Deluxe Edition
Simba uye Mashiripiti: Magamba II Goridhe Edition
Simba uye Mashiripiti: Magamba III Akazara Edhiyo
Simba uye Mashiripiti: Magamba V Standard Edition
Simba uye Mashiripiti: Magamba VI Goridhe Edition
Simba uye Mashiripiti: Magamba VI Mumvuri yerima
Simba uye Mashiripiti: Magamba VII Deluxe Edition
Simba uye Mashiripiti: Magamba VII Kuedzwa neMoto
Panzer General 3D kurwisa
Muchinda wePersia (2008)
Muchinda wePersia: Iyo Yakakanganwika Sands Deluxe Edition
Muchinda wePersia: Iyo Sands yenguva
Muchinda wePersia: Iwo maThosi maviri
Muchinda wePersia: Hondo Mukati
Rayman Kuchengetedza Rabbids
Silent Hunter 4: Mhumhi dzePacific Goridhe Edition
Silent Hunter 5: Hondo yeAtlantic Goridhe Edition
South Park: Iyo Yakaputswa asi Yakazara Goridhe Edition
South Park: Iyo Tsvimbo Yechokwadi Standard Edition
Starlink Dhijitari Deluxe Starter Kit
Makuru X Mitambo Goridhe Edition
Iyo Crew Yekupedzisira Edition
Iyo Crew 2 Goridhe Edition
Iyo Settlers 1 Nhoroondo Yekudhinda
Iyo Settlers 2 Nhoroondo Yekudhinda
Iyo Settlers 3 Nhoroondo Yekudhinda
Iyo Settlers 4 Nhoroondo Yekudhinda
The Settlers 5: Nhoroondo yeMadzimambo Nhoroondo Edition
The Settlers 6: Kumuka kweiyo Empire Nhoroondo Edhisheni
The Settlers 7: Nzira kuKingdom History Edition
Hondo yaTom Clancy
Tom Clancy's Ghost Recon Yemberi Soldier Deluxe Edition
Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands - Yekupedzisira Edition
Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint Goridhe Edition (kuuya munguva pfupi)
Tom Clancy's Muraraungu Wechitanhatu Shanduro
Tom Clancy's Rainbow Six 3 Goridhe Edition
Tom Clancy's Muraraungu Wechitanhatu: Lockdown
Tom Clancy's Muraraungu Wechitanhatu: Kukombwa - Yekupedzisira Gore Rina Shanduro
Tom Clancy's Muraraungu Wechitanhatu: Vegas
Tom Clancy's Muraraungu Wechitanhatu: Vegas II
Tom Clancy's Muraraungu Wechitanhatu: Quarantine (kuuya munguva pfupi)
Tom Clancy's Splinter Cell Nyore Yekutsiva Deluxe Edition
Tom Clancy's Splinter Cell Chaos Dzidziso
Tom Clancy's Splinter Cell Chivimbo Deluxe Edition
Tom Clancy's Splinter Cell Kaviri Mumiriri
Tom Clancy's Chikamu cheGoridhe Edition
Tom Clancy's Chikamu 2 Chekupedzisira Edition
Miedzo Evolution Goridhe Edition
Miedzo Fusion Yakajairwa Edition
Miedzo Inokwira Goridhe Edition
Varwi vehondo Hondo
Varwi vehondo Hondo yechipiri
Tarisa Imbwa Dzakakwana Edhisheni
Tarisa Imbwa 2 Goridhe Edition
Tarisa Imbwa Legion Yekupedzisira Edition (kuuya munguva pfupi)
Nyika Mukukonana Yakazara Edition
Ndinovimba kuti neizvi kumwe kusahadzika kwawanga uchiri nako nezveGoogle Stadia kwakajekeswa. Unotoziva kuti izvozvi chinhu chete chinoshaikwa mirira november 2019 zvekuti inosvika uye iwe unogona kuzviedza iwe pachako, asi zvinhu zvinotaridzika zvakanaka kwazvo ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » Google Stadia: dhata nyowani nezve vhidhiyo mutambo webasa
Kushamisika mumaziso: Linux 5.3 inotsigira trackpads uye keyboards eazvino MacBook
Wakambonzwa nezveDataSpii? Kana bhurawuza rako rekuwedzera richiziva zvakanyanya